Ma qaadan karaa bac si aan qaboojiyaha ku rido markaan khudaarta guriga ka soo iibsado?
by admin on 2022-05-16
Hadda waa inaan u baxnaa si aan cunto u soo iibsanno maalin kasta, ka dib dhammaan, maaddooyinka ayaa ah kuwa ugu cusub, markaa marka aan iibsanno maaddooyin badan markiiba, waxaa hubaal ah inay jiraan baco badan oo baco ah, oo ku yaala wajiga bacahaas midabka leh. , guud ahaan waa sida aan wax uga qabanno?Asxaabta qaar waa la tuuri doonaa...
Hadda cuntadu waxay yeelan doontaa bacaha baakadaha, maanta aynu fahamno saamaynta bacaha cuntada 1. Dayactirka jirka.Cuntada lagu kaydiyo bacda waxay u baahan tahay inay ka hortagto cajiin, garaacid, dareenka, kala duwanaanshaha heerkulka iyo ifafaale kale.2. Ilaali qolofka.qoloftu way kala saari kartaa...
Sida loo doorto bacaha qashinka
by admin on 2022-04-25
Horumarka tayada nolosha, tirada iyo noocyada qashinka guriga ayaa sidoo kale sii kordhaya, laga bilaabo waraaqaha musqusha ilaa cuntada hadhaaga ah.Bacaha qashinka waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qoys walba, iyo tayada xun ee bacaha qashinka ee warqadaha musqusha ee caadiga ah iyo qolofka khudaarta, b...
by admin on 2022-04-20
Bacaha balaastikada ah waxay noo keenayaan raaxo nolosheenna.Waxaa loo isticmaalaa baakadaha cuntada, baakadaha cad iyo baakadaha alaabta.Waxaan leenahay khaladaad gaar ah oo ku saabsan iibsashada, kuwan soo socda ayaa diiradda saaraya iibsashadayada bacaha bacaha caagga ah waa in fiiro gaar ah loo yeesho waxa muhiimka ah, sida loo doorto deegaanka ugu fiican ...
Waa maxay habka loo xirxiro habaynta bacda
by admin on 2022-04-13
Bacdu waa meel kasta oo nolosheenna ah, dooro qaabka ay u samaysan tahay nooca bacda: hadda nooca bacda ee laga isticmaalo suuqa guud ahaan waa supermarket-ka loo yaqaan bacda wax iibsiga, bacda noocaan ah ayaa loo magacaabay sababtoo ah bacda labada daraf ee sidi jaakad oo kale.Waxaa loo isticmaalaa in lagu xidho cuntada loo yaqaan bacda cuntada,...
Bacaha balaastikada ah waxay noqdaan 'bacaha ku habboon' ee muunad wax-ku-ool ah
Muunaynta qoyska, shaqaalaha caafimaadku waxay u baahan yihiin inay wataan gacmo nadiifiyaha, suufka cunaha, tuubada qashinka, bacda qashinka iyo alaabada kaleba.Sidee loo sameeyaa haddii labada gacmood aysan ku filneyn?Si loo horumariyo waxtarka muunad-samaynta qoyska, xubnaha kooxda muunad-samaynta aashitada nukliyeerka ee Jinjia...
Ma runbaa in "bacaha balaastikada ah" ee talaajadu ay keento kansar?
Waa maxay faraqa u dhexeeya bacda cusub iyo bacda?Bacaha haynta cusub ee lagu iibiyo suuqa waa polyetylen (PE), polyvinyl chloride (PVC), chloride polyvinylidene (PVDC) saddex.Waxaa ka mid ah, PE iyo PVDC waa kuwo ammaan ah.Midka hore waxaa guud ahaan loo isticmaalaa baakadaha khudaarta iyo khudaarta...
Bacaha bilaashka ah ee dukaanka weyn.Jooji u jiid guriga!
Si ay ugu habboonaato, dukaamo badan oo khudaar, khudaar iyo hilible ayaa ku siin doona bacaha balaastiga ah oo bilaash ah.Si kastaba ha ahaatee, odayaal badan ayaa taga dukaamada si ay cunto uga soo iibsadaan, waxay jiidayaan baco badan si ay guriga ugu qaadaan, kaliya maaha inay ku raagaan khudaarta, hilibka, laakiin sidoo kale bacaha balaastiga ah si ay ugu duubaan cuntada, toos ah ...